अन्य विधा (निबन्ध) | मझेरी डट कम
HomSuvedi — Thu, 12/12/2013 - 06:14
मझेरीका माध्यमबाट पनि नेपालको सम्विधान बनोस् भन्ने भावनाहरु कविता वा गजलका माध्यमबाट अभिव्यक्त भएका पाइएका छन् । अनि यसभित्रका पाठकहरु र यसका रचनाकार तथा ग्राहकहरु अवश्य पनि बौद्धिक हुनु पर्ने हो भन्ने मेरो विश्वास छ । सम्विधान बनेपछि हातमा पापा नै आउला भन्ने बालहट जस्तो कुरा यहाँका लेखकरुले पनि गरेको देखियो । सम्विधान बनेर नेपाललाइ चिरेपछिलाइ हाम्रो पनि राज्यमा पहुँच पुग्छ भन्ने आशा गरेको भाव गजल कविता र साना कथाहरु तथा केही गन्थनहरुमा समावेश गर्दै लेखेको र मझेरीमा पोस्ट गरेको पनि म केही महिनादेखि यदा कदा पढिरहेको छु । साथीमाइहरुले यो सबै भ्रम हो भन्ने कुरा बिर्सनु भएन । सम्विधान बने पनि हामी
के नेपाल सानो छ ? (रिमिक्स)
Deep Raj Sharma — Sun, 12/23/2012 - 08:56
उर्वसीको चित्कार, देवदुन्दुभीको घोष, एक लहर नभमा गोता खाईरहेछ, चित्त सानो हुनेले, भन्छन -नेपाल सानो! यो कस्तो सम्योग ? धर्तीको छातीऊपर नाचिरहेछ- मयुर । दिवा स्वप्नझैं लाग्ने ती मनका रहरहरु- यो मुलुक बोल्दछ, सुनाउँछ यसले ईतिहास, देखाउँछ कोर्राका डाम,प्रस्फुटन भईरहेछन- शब्द अनाम । बाचेको छ, बाचिरहनेछ सदियौं; पिडा भले हजार भऊन, गङाको-तीर तिरै गाईरहनेछन गाइनेहरु - 'वीरताको चीनो, सहिदको रगत...'। भुलिरहेछ मानिस आफ्नो ईतिहास तर एक वेग पवनको- मीठो उपहार जीवनको- सँगालेर, उच्छवास जीवनको खोज्दै, हाम्फाल्दै छन-पिढीहरु । मानिस उही, जुनी उही तर फरक छ आत्मियताको उपहार!
alok — Sat, 04/18/2009 - 18:58
स्वइच्छिक शरणार्थी भएर देश्बाट टाढिएपछी देश प्रेम त अझै गाढा हुने रहेछ । छुट्टीको एउटा आईतवार इन्टर्नेट मार्फत देश खोज्दै थिए । शिर्शकमा भएको म्रिदुल मर्मस्पर्शी लयले तान्यो मलाई । हो यो रचानाको सिर्जना धर्म र सिर्जना काल फरक छ । यो धेरै अगाडि जन्मेर भूत भईसक्यो । तर अझै पनि लय र मर्मले यस्को चिरायु कायमै छ। बारम्बार नेपाली हुनुले ढक्क फुल्ने मेरो छाती अझै गर्भिलो महसुस गरे यो लय र पुर्खाको त्याग सम्झेर ।
kbs — Sat, 08/23/2008 - 08:22
बुबा भन्नुहुन्थ्यो पढेलेखेर ठूलो मान्छे बन्नुपर्छ । आमाका सपना पनि कम्तीका थिएनन् । राम्री र लच्छिनकी बुहारी भित्र्याएर बुढेसकालमा आनन्दका साथ नातिनातिनासाग रमाएर बिताउने आमाको भित्री सोच थियो क्यार । छिमेकका काकाकाकी, दाइभाउजू, मामामाइजू सबैको आशाको केन्द्र मेरो पढाइ बनेको थियो । त्यसबखत मेरो मन आशाको ठूलै बोझ बोकेर गह्रौा बनेको भान हुन्थ्यो । दायित्वको बोझबाट मुक्त हुने काम सामान्य मान्छेका लागि कठिन बन्दोरहेछ ।
kbs — Thu, 08/07/2008 - 17:03
kbs — Wed, 07/23/2008 - 17:31
kbs — Wed, 07/23/2008 - 17:03
खिजि्रङ–मिजि्रङ सामानहरूको एउटा सानो दोकान थियो माथ्लो छाताचोकमा, टाउको लुकाउने आफ्नै ओत भएपछि आमाले साहससाथ सुरु गर्नुभएको। त्यस चोकमा पहिल्यैदेखि रहेका अरू दोकानहरूको तुलनामा हाम्रो दोकान त फुच्चे र केही न कामको देखिन्थ्यो। तर आमाले बाको किञ्चित् सहयोगबिना खोलेको त्यही दोकान हाम्रो जीवनाधार थियो। हाम्रो खेतीपाती, बन्दव्यापार, अध्यवसाय त्यही दोकान थियो।